Home AKWOTKWỌ AKWOTKWỌ AKWOTKWỌ AKWOTKWỌ AKWOTKWỌ AKW FOKWỌ Ndị egwuregwu bọọlụ Brazil Richarlison Childhood Story Plus Ihe Na-adịghị Agbanwe Eziokwu Akụkọ
LB na-egosi Full Story of a Brazilian Star nke kacha mara aha na aha njirimara; 'Football's Big Big Ihe'. Ricmụaka anyị Richarlison Akụkọ ya na akụkọ ndụ Biography na-ewetara gị akụkọ zuru oke nke ihe ndị a ma ama site na nwata ruo n'oge.
Nyocha nke ọkachamara ọkachamara na Brazil na-agụnye akụkọ ndụ ya tupu ama aha ya, ndụ ezinụlọ ya, ndụ mmekọrịta ya na ọtụtụ OFF-Pitch amaghị ihe banyere ya.
Ee, onye ọ bụla maara banyere ikike ya mana ole na ole na-atụle Richarlison Biography nke na-atọ ụtọ. Ugbu a na-enweghị adieu ọzọ, ka anyị bido.
Richarlison Childhood Story - Mmalite Ndụ na Ezinụlọ:
A mụrụ Richarlison de Andrade na ụbọchị 10 nke May 1997 na Nova Venécia, Espírito Santo, Brazil. Ndị mụrụ ya mụrụ ya Taurus, Mr na Mrs Andrade.
Richarlison bụ ọkpara n’ime ụmụ ise ọ mụrụ nye nna ya bụ onye nkume na nne ya, onye na-ehicha ihe na onye na-ere ude. Nke a pụtara n'ụzọ nkịtị na a mụrụ ya na ịda ogbenye. Ọrụ ha taa agbanweela ekele maka nwa ha nwoke nke mere ya na ndụ.
Banyere ndụ ezinụlọ, mama ya na nna ya nyere Richarlison ezi ọzụzụ ime mmụọ.
Mgbe ọ bụ nwata, onye Brazil rere chocolate na ice cream iji kpata ego, ebe ndị enyi ya rere ọgwụ ọjọọ.
N'okwu ya ...“Ọtụtụ n’ime ndị enyi m gara ire ọgwụ ọjọọ n’okporo ámá n’ihi na ha hụrụ ego dị mfe; nnukwu ego. Mana ama m na ọ bụ ihe ọjọọ ka m rere chocolate na ice cream wee saa ụgbọ ala maka na amaara m na nke ahụ bụ ihe kwesiri ekwesi.
Enwekwara m ike inyere nne m aka. 'Ndị enyi m na-agwakarị m:' Bịa ebe a, abụla obere nwa agbọghọ, bịa soro anyị smokeụọ sịga, bịa soro anyị ree, ị nwere ike ị nweta ego karịa ”.
Richarlison ahọrọghị ndụ omempụ. Obere afọ ojuju ya n'agbanyeghị na ọ bụghị onye na-ere ice cream kacha n'ụwa.
Richarlison Biography - Malite na Football:
Richarlison tolitere na Nova Venecia nke dị n'ebe ndịda ọwụwa anyanwụ nke Espirito Santo - nke na-eto oke osimiri dị egwu ma mara mma maka ịmalite ígwè na mmanụ ala karịa ndị na-agba ụkwụ.
Na-ekwu okwu naanị maka Sun banyere ndụ ya na Brazil, Richarlison kwuru, sị:
“Mgbe m dị afọ asaa, nna m zụtara m bọọlụ iri, ọ bụghị n’ihi na o nwere ike ime ya kama ọ bụ n’ihi na ọ chọrọ ka m bụrụ ezigbo ndị ọgba bọọlụ.
Ọtụtụ oge mụ na ndị enyi m na-egwuri egwu n'okporo ámá, jiri akpụkpọ ụkwụ anyị mee ihe mgbaru ọsọ. Ọ dị ka favela, ebe dara ogbenye. ”
Site na nwata, igwu egwu na Premier League bụ nnukwu ọchịchọ maka Richarlison. O kwukwara, sị:
“M na-ekiri Premier League na TV nwanne papa m. Enwere m mmasị n'ihe m na-ahụ - ọsọ nke egwuregwu ahụ na otu ọ na - enweghị mgbe ọ kwụsịrị. "
Richarlison n'oge ahụ na-agwa uche ya okwu mgbe niile saying 'Aga m egwu n'ebe ahụ otu ụbọchị'.
Richarlison Biography - Onye Dị Ndụ:
Richarlison atachiri njem dị ịrịba ama iji mee ebe ọ nọ taa. Mgbe ọ dị afọ 14, na-enweghị nchekasị ma na-egwu bọl n'okporo ámá nke Nova Venecia, na ndịda ọwụwa anyanwụ Brazil, ọdachi ahụ mere.
Ederson Moraes Child Story Plus Ihe na-emeghi ihe omuma
Otu onye omempụ na onye na-a drugụ ọgwụ ọjọọ na-atụtụ aka ma na-agbanye mgbatị egbe ya n'egedege ihu nke Richarlison.
Nke a na-esote ya na-enye ụdị egwu ọ bụla maka itinye aka (ịgba bọl) na mpaghara ọgwụ ya.
Dị ka Richarlison si kwuo ya, “N’oge ahụ ụjọ tụrụ m nke ukwuu. N'ihi na ọ bụrụ na ọ dọtara trigger, mgbe ahụ ọ gaara agafe.
Onye isi ọgwụ ahụ gwara anyị na ọ bụrụ na ọ chọta anyị ọzọ na ọ ga-agbapụ anyị n'enweghị nsogbu ọ bụla - mụ na ndị enyi m. Echere m na ọ bụ onye ọzọ ka ha ghagburu.
O chere na m na-ezu ohi ọgwụ ya ma na-eji bọlbụ dị ka ụdị ngbanwe, mana m na-egwu egwu football winke ndị enyi m.
Mgbe ọ budata égbè ya, m tụgharịrị ma malite ịgba ọsọ. Alaghachikwaghị m n'okporo ámá ahụ. Agwaghị m ihe ọ bụla. Veryjọ tụrụ m nke ukwuu. ”
Richarlison Untold Bio - Nzute a Godsend:
Ọrụ ebube mere mgbe Richarlison bụ 16.
Ndụ onye aghụghọ ahụ gbanwere mgbe ọ zutere onye ọchụnta ego Renato Velasco, bụ onye hụrụ ikike ya mgbe ọ na-egwu egwuregwu na-eto eto na Real Real Real Noroeste.
“Renato bụ onye mbụ nyere m ohere. N’izu nke mbụ, o nyere m akpụkpọ ụkwụ bọọlụ n’ihi na tupu mgbe ahụ, eji m ihe ndị na-adịghị mma na-egwu egwu. ”
Mgbe enyechara aka na akpụkpọ ụkwụ, Renato Velasco gwara Richarlison, Aga m enyere gị aka n'ihi na ị nwere mma.
Àgwà ahụ nke Renato kwuru banyere ya mere ka Richarlison gaa America Mineiro na ọkwa nke abụọ nke Brazil na Disemba 2014 na Fluminense (ọkwa Brazil kachasị elu) otu afọ mgbe e mesịrị.
Richarlison Bio - Ọrụ Ebube:
N'August, oku na-akpọ fon na Marford Silva, bụ onye isi Watford, mere ka Richarlison gbaa snub Ajax na 11th hour ma sonye na Hornets.
N'ezie, Watford bịanyere aka na 20 afọ n'okpuru aha nke Ajax. Na-awụ akpata oyi n'ahụ, ọ nwetara ikike ọrụ UK n'agbanyeghị agbanyeghị egwuregwu bọọlụ Brazil.
Ọ na-esiri onye na-egwubeghị egwuregwu mbụ nke Brazil ike inwe ikikere ọrụ. Okwu Richarlison dị iche.
Richarlison gwara ESPN Brasil. "Mgbe Marco kpọchara m, emere m google nyocha na Watford ma anyị mechara kwekọrịta n'oge na-adịghị anya."
Ọ dị mkpa ịmara na Renato Velasco bụzi onye njikwa Richarlison.
Ọ bụ Obi onye nyeere Richarlison aka ịbanye n'England. Richalison na-ahụ Obi dị ka onye nduzi ya. Ha abụọ maara nke ọma na ibe ha na Brazil tupu oge ebute ha na London ebe ụlọ ha (Chelsea na Watford) dị.
Richarlison dịkwa nso Neymar onye ọ na-ahụ dịka onye nlereanya ya. N'oge ezumike, ọ na-ewepụta oge iji leta ya na Paris.
O doro anya na Richarlison bụ ihe na-esote na football.
Onye uwe ojii abụrụla obi na mkpụrụ obi nke mmalite Hornet na mkpọsa 2017/2018, na-atụle ihe mgbaru ọsọ atọ na njikọ na ndị na-egwu egwu na nka, ọsọ na usoro ya.
Ma na-eche echiche azụ, afọ anọ gara aga site na ide, ndụ nwata ahụ dị nnọọ, dị nnọọ dị iche. Ya onwe ya enweghi ihe ijuanya n'ihi na ọ maara na ọ dịtụbeghị mgbe ọ kwenyesiri ike na ya nwere ikike.
O kwuru otu oge… "Ọ bụghị ihe ijuanya na ihe niile dị ndụ m gbanwere ngwa ngwa. Site n'ụbọchị m malitere igwu egwu America, mgbe ahụ Fluminense, ugbu a na Premier League - ihe niile abịala n'oge kwesịrị ekwesị. "
Onyinye nke esenidụt - ọkachasị ndị na - eto eto - na - achọkarị oge iji gbanwee bọọlụ bekee mana Richarlison dịla anya n'ụlọ, n'agbanyeghị na ọ ka na - ejide asụsụ ahụ.
Onye bụ Richarlison Girlfriend ma ọ bụ nwunye ga-abụ?
Ee, ọ bara ọgaranya ugbu a, ee ọ bụ nwoke mara mma nke pụtara na ọnụ ụzọ Richarlison mepere emepe maka ihe ụtọ niile gụnyere ịnwe enyi nwanyị.
Agbanyeghị, Richarlison (n'oge ederede) ahọrọla ime ka mmekọrịta mmekọrịta ya bụrụ nke nzuzo. Ọ bụ naanị oge tupu anyị achọta ihe.
Atụmatụ maka Watford & Brazil:
Richarlison nwere nnukwu atụmatụ maka Watford. N'okwu ya…
"Atụmatụ m bụ ide akụkọ ihe mere eme na Watford. Achọrọ m ịche ọtụtụ ihe mgbaru ọsọ ma cheta ya. Nakwa, ana m atụ anya na otu mba Brazil ga-akpọ otu ụbọchị, nke bụ ihe mgbaru ọsọ m nke 1 na ndụ m. Ịbụ na World Cup bụ nrọ m. "
Toughest EPL Onye iro:
Richarlison adịghị eri oge iji gbanwee aka na Bekee, ma na-akpọ John Stones ọnụ dịka onye iro kachasị ike ọ hụworo ugbu a.
Harkpụrụ Richarlison Zodiac:
Zodiac Richarlison bụ Taurus ma nwee àgwà ndị a na àgwà ya;
Ike nke Richarlison: Ị nwere ike ịdabere na ya, ndidi, dị irè, nke nwere obi ike, onye nwere ọrụ, nke nwere ike.
Richarlison si Ike: Stubborn, possessive, na-enweghị nsogbu.
Ihe Richarlison nwere mmasị: Ugbo, nri, egwu, romance, akwa akwa uwe, na-eji aka.
Ihe Richarlison Chọrọ: Mgbanwe na mberede, nsogbu, nchebe nke ụdị ọ bụla, akwa akwa.
Daalụ maka ịgụAnyị Richarlison Nwatakịrị Na-akọ akụkọ ọzọ akụkọ ihe omuma. Na LifeBogger, anyị na-agbasi mbọ ike maka izi ezi na ịkwụwa aka ọtọ. Ọ bụrụ na ị hụ ihe na-adịghị ele anya n’isiokwu a, biko tinye okwu gị ma ọ bụ kpọtụrụ anyị!